Zimbabwe – GLPOST
By Staff Reporter Your Excellency (Kagame), you’re not expected to remember everything.” MDC-T leader Nelson Chamisa has hit back at Rwandese leader Paul Kagame who earlier Wednesday rejected claims he had received Zimbabwe’s assistance with his country’s Information Communication Technology
Dear Zimbabwean brothers, whatever you do, DO NOT assassinate your President Robert Mugabe.
By Bosco Mutarambirwa Regardless of his mistakes as an old-school fellow, President Mugabe is still the father of your Independence. Don’t you ever underestimate him as a SYMBOLIC public figure that unite Zimbabwe. Faced with a similar situation back in
Mnangagwa in Zimbabwe to take control of government
Harare – Dismissed former Zimbabwean Vice-President Emmerson Mnangagwa arrived in Harare on Wednesday to take control of the country’s government. Mnangagwa, known as “The Crocodile”, was sacked last week amid a row over leadership in the ruling Zanu-PF Part of
Updates from Zimbabwe: The love for trying to create a Mugabe dynasty is leading to President Mugabe’s disgraceful downfall. On Monday, Commander Constantino Chiwenga said: “We must remind those behind the current treacherous shenanigans that when it comes to matters